Ufuna I-Anime Enhle Kakhulu Yesikhathi Sonke? Lolu hlu Olwakho - Okunye
I-67 Yemibukiso Engcono Kakhulu ye-Anime Yesikhathi Sonke (Alikho i-oda Lesikhundla)
Yini echaza 'i-anime ehamba phambili' yesikhathi sonke?
Impendulo enengqondo kunazo zonke isuselwe ku- izilinganiso nokubuyekezwa okuvela kumasayithi afana ne-MAL (MyAnimeList).
Inkinga yalokho yilokhu: kukhawulelwe kuzithameli ze-MAL. Futhi okunye ukubuyekeza akukhona engingakuthatha njengokubuyekezwa 'kwangempela'. Yizikhalazo nje zezingane ezivela kubalandeli be-anime.
Ngemuva kwalokho unayo ukuvota kwe-anime okuqhutshwa yiJapan , ukuqoqa hhayi ngaphezulu kwama-10,000-100,000 + amavoti esewonke. Inombolo encane uma ubheka izigidi ezingama-50-100 zabalandeli emhlabeni jikelele.
Ngenxa yalokho, ayikho indlela ephelele yokuxazulula lezi zingxoxo eziphikisayo.
Ngakho-ke ngalokho kusho ukuthi ... Nalu uhlu lwami lwe-anime olukhulu kunalo lonke!
Ama-Anime engizizwa ukuthi AYIKHONA KAKHULU, futhi afanelwe isikweletu sonke noma ngaphezulu kunalokho abakutholayo.
Ama-Anime Ama-67 Ahamba Phambili Esikhathini Sonke (Akukho-Oda Osezingeni):
I-Monster yenza into eyodwa kahle: zwakalisa 'isilo sangaphakathi' ngaphakathi kwethu sonke.
Ukuphela kokudingayo yi- akulungile isethi yezimo zokuqalisa umuntu othile endleleni emnyama. Ukuvusa okubi esingakaze sizicabange ukuthi singakwazi ukukwenza.
Ambalwa ama-anime anjalo.
2. UViolet Evergarden
UViolet Evergarden kukhanya ngenxa yokuxoxa kwayo okusuka enhliziyweni, ngokomzwelo.
Awuzweli nje ukuzwelana nomlingiswa ophambili, ubuye uzizwe ngezinhlamvu zokusekelwa ezibonakala endleleni.
UVietlet Evergarden uxuba izigcawu ezinhle, izithombe ezimangalisayo, nezindaba ezinamandla konke kube yibhola elilodwa lobukhulu.
3. UClannad: Ngemuva Kwendaba
Isizini 1 seClannad kwakukuhle, kepha akuqhathanisi ngisho nobukhulu besizini 2.
NjengoViolet Evergarden, uClannad After Story ugcwele ubuhlungu nosizi. Kokubili okumbalwa i-anime ikwazile ukuveza kahle kangaka.
IJormungand yiyona kuphela i-anime yalolu hlobo ukuveza impilo yabathengisi bezikhali. Kuyiqiniso ukuthi indaba ixoxwa, okuhlangenwe nakho, nezindlela zokuphila eziholwa ngabathengisi bezikhali.
Le anime ingubuciko obuphambili bokuthi yenzani futhi ihloselwe ukukwenza.
UMadoka Magica ungene esithombeni wathi: 'f * ck konke lokhu okuchazayo intombazane yomlingo bullsh * t, sekuyisikhathi sokunyakazisa izinto'.
Yilokho okwenza Madoka Magica Kuhle. Esikhundleni sokulandela umzila ojwayelekile, it wephule umhlangano futhi waguqula uhlobo lwaba yinto emnyama futhi ephazamisayo.
6. IBlack Lagoon
NjengoJormungand, iBlack Lagoon ingelinye lama-anime amabi kakhulu emhlabeni.
Umlingiswa ngamunye unomlando okhathazekile ohlotshaniswa nokudlwengulwa, ukuhlukunyezwa ngokocansi, izidakamizwa, ubugebengu, nakho konke okumelwe yizwe elingaphansi komhlaba.
IBlack Lagoon yenza kahle kakhulu kulo mnyango. Futhi isenzo siyazikhulumela.
7. I-Psycho Pass
IPsycho Pass ihlola i-sci-fi ngokombono wamaphoyisa nomthetho. Futhi masingakhohlwa ngobuchwepheshe obunjalo ngaphambi kwesikhathi sayo kulolu chungechunge lwe-anime.
Kunezigcawu ezimbalwa zamaphoyisa njengoba kunjalo emhlabeni we-anime, futhi iPsycho Pass ikwenza kuthakazelise ukubukwa ngaphandle kwama-cliches.
Ukubiza iPsycho Pass ngokuthi “okwangempela” akusho lutho. Akukho ukuqhathanisa ngalokho ekwenzayo.
8. Inkemba Art Online
I-Sword Art Online ibhekwa ngaphezulu kwekhanda layo kakhulu. Eqinisweni ngithole kanjalo. I- abazondayo kungenze ngafuna ukwazi.
Okwenziwa yiSAO kakhulu ukuxuba imidlalo neqiniso elibonakalayo, nokwenza mnyama kancane ukunonga izinto phezulu.
Mayelana nokudlala kanye ne-VR, ayikho i-anime esondela kulokho okumelwe yiSAO. Futhi impumelelo yayo ingaphezu kokufanelekile.
I-anime engaphambi kwesikhathi sayo.
Ne-Sword Art Online: I-Alicization iyona engcono kunazo zonke esizibonile ochungechungeni lweSAO kuze kube manje.
9. U-Akame Ga Kill
U-Akame Ga Kill yilokho okwenzekayo lapho izakhamizi ezweni zivukela uhulumeni nomphakathi okhohlisayo, ongenasimilo.
Yilokhu u-Akame Ga Kill amayelana nakho, futhi kwenza iphuzu lalo licace ngesihluku, isenzo esinamandla, kanye nokunye kwe- okuhle kakhulu ukulwa nezigcawu i-anime okufanele inikele.
Kuyinto encane engajwayelekile futhi ngendlela ephatha ngayo abalingiswa abakhulu (nokufa kwabo).
UShiki uqala kancane, kodwa kugcina sekuyinto emnyama, ephazamisayo nenenselele yokuziphatha, ukuthi ngeke wazi ukuthi ucabangani.
Yile nto eyodwa engiyithanda kakhulu ngoShiki. Enye yezinto ezesabekayo ezihamba phambili ngaso sonke isikhathi.
Ngakolunye uhlangothi, iHinamatsuri izokukwenza uqhume ukuhleka ngenxa yamahlaya ayo angenangqondo.
Ngokwesinye isandla, i-anime izokuletha eduze kokukhala nokukhala.
Kuwo wonke ama-anime engiwabukile, bambalwa kakhulu abakwaziyo ukuveza amahlaya 'nokudabuka' kahle ngaphandle ukuqhuma phezulu omunye.
Yilokho okwenza iHinamatsuri ikhetheke kimi.
12. I-Dragon Maid kaMiss Kobayashi
Ama-Dragons ahlala eceleni kwabantu awazidali ngokwawo. Kepha indlela i-anime ewusebenzisa ngayo lo mqondo futhi iwuguqule ube amahlaya ahlekisayo, kanye nezinto ze- 'slice of life' ziyaheha.
Futhi kubukeka kuhle ukukwenza.
Enye yama-anime ambalwa wokubhekana nemiqondo enzima njengokucindezelwa nokuzibulala.
Ngalesi sizathu kuphela, nangenxa ye- Kanjani okuvezwa kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni kungokomzwelo kakhulu ukungakunaki.
Ngithokozela ukugqwayiza okuyingqayizivele futhi.
14. I-Dragon Ball Z
I-DBZ iyi-classic. Yisizathu sokuthi imboni ye-anime ibekhona ngisho nasemhlabeni jikelele.
Akukho okunye ongakusho.
I-Bleach ngokuyisisekelo i-DBZ ngaphandle kwezinhlamvu ze-OP.
Yisho okufunayo nge-Bleach, kepha ayikho i-anime engayifaka esikhundleni salokho ekwenzayo.
Okuhlobene: Izingcaphuno ze-Anime Ezinkulu Ezivela Ku-Bleach Ema Isikhathi Sokuvivinywa
16. Umthakathi Ondizayo
I-Flying Witch iyona elula kunazo zonke ukuphumula uchungechunge engake ngalubuka.
Awekho ama-clichés, insizakalo yabalandeli noma umbhedo ojwayelekile obonwa ku-anime yakho yansuku zonke. Futhi yilokho okwenza iFlying Witch ivelele.
Yinto esondele kakhulu kuthelevishini 'yangempela', ngaphandle kokuthi i-animated.
17. Umakoti Wami Uyintandokazi
Uchungechunge lwe-anime olungaphansi olungatholi uthando oluningi noma ukuqashelwa.
Ngesikhathi sayo amahlaya (kanye ne-parody) ngezinye zezinto ezenziwa kahle kakhulu engake ngahlangabezana nazo.
Kuyinto yamahlaya uqobo uqobo.
18. Umsila Wenganekwane
I-Fairy Tail inezinselelo ezinhle kakhulu ezinganikezwa i-anime. Iqhathaniswa nemibukiso efana ne-DBZ.
Angikaze ngibone izinhlamvu eziningi kangaka ezingakhohlwayo nezinenzuzo ngesikhathi esisodwa.
Ngokuyinhloko uchungechunge engiluthandayo lweShounen lwekhulu lama-21.
19. Impilo Eyinhlekelele Ka Saiki K
Enye yamahlaya ahlekisa kakhulu, nobuciko kunayo yonke yeminyaka yakamuva. Ngiyayithanda ithukwa tropes ejwayelekile, ngaphandle empeleni nginyathela kuleyo nsimu.
20. Re Zero: Ukuqala Impilo Komunye Umhlaba
Enye i-anime ehlambalaza ama-trope ajwayelekile, futhi ayizithathi kakhulu.
Futhi izici ezijulile, ezimnyama, nezingokwengqondo zikaRe Zero zikwenza kube i-anime ezokwenza ucabange.
Okuhlobene: Izizathu ezi-5 ezilula zokuthi kungani u-Emilia ENGCONO kune-Rem kusuka ku-Re Zero
21. IHigurashi: Lapho Bakhala
I-Higurashi ifana nesilingo esisodwa esikhulu sesayensi. Cishe akunakwenzeka ukwazi ukuthi yini ezolandela ngokulandelayo, nokuthi izinto zizovela kanjani.
Ochungechungeni lwama-horror, alulindelekile, luhlakaniphile, futhi lunye lwezinto ezicabanga kakhulu.
22. UTanaka Kun Uhlala Esohlwini
I-anime elula enamahlaya alula. Kulula kakhulu ukuthi kuyahlekisa, futhi uTanaka Kun uyikho ukuphumula ngokwanele ukulala ukuze.
Isigaxa sempilo esigxile emiqondweni efana nokuzithuthukisa, ukukhula, ukucabanga kanye nobudlelwano
Awukwazi ukuqhathanisa iBarakamon. Futhi ngochungechunge olufushane, inekhwalithi eningi epakishwe kuyo.
24. Qhawe Lami Academia
I-My Hero Academia ingenye ye-anime enkulu yekhulu lama-21. Uhlobo lweShounen beludinga okuthile okusha, futhi i-MHA iyimpendulo yaleso sidingo.
UShakugan No Shana yindawo enkulu egcwele amaDenizens, iFlamme Haze nabantu ababanjwe phakathi.
Inokuhlanganiswa okuhle kwezinto ezingokwemvelo (ngaphandle kokuya phezulu), izithombe ezihloniphekile nezinhlamvu ezithokozisayo ezinamakhono athakazelisayo.
Isizini ngayinye yehlukile, futhi yinto yakudala ejwayelekile emehlweni ami.
26. Eureka Isikhombisa
Uchungechunge lwe-mecha ngaphandle cha ukuqhathanisa.
Eureka Seven (enziwe yiStudio Bones) isebenzisa imfihlakalo, izinkomba eziseBhayibhelini, abalingiswa abahlukahlukene nezothando ukuxoxa indaba yayo.
Futhi ayikho iMecha emhlabeni ekwenza kangcono kule ndawo (ngisho neDarling In The Franxx).
27. I-Full Metal Panic!
I-Full Metal Panic kuthatha ukuthandana kwezikole zamabanga aphakeme, futhi kunezela ubuphekula, isenzo, kanye namaqiniso kulengxubevange.
Lokhu kungenye yama-anime angavamile atholakalayo kungcono kakhulu ngesizini ngayinye ekhiqizwayo.
28. Ukuphakama Kweqhawe Lesihlangu
Ukuphakama Kweqhawe Lesihlangu kuyinto muva nje uchungechunge lwe-anime kusuka ku-2019. Kodwa kungenye yezimbalwa ze-Isekai engizilinganisela kakhulu.
Umzabalazo ongokoqobo kaNaofumi wokulwa indinganiso ephindwe kabili lokuhlukunyezwa ngokocansi, nokuthi izwi lowesifazane likholelwa kanjani ngaphandle ubufakazi.
Ukwehliswa isithunzi komlingiswa wakhe njalo, futhi abantu abaningi benqaba 'ukucabanga' noma ukubuza ukuthi ngabe kuliqiniso noma cha ... Ingasaphathwa eyobudlelwano bukaNaofumi noRaphtalia (nezinye izinto).
IShield Hero iluchungechunge olunengqondo njenganoma iyiphi enye, futhi ukhipha okungcono kunalokho okungafunwa yi-anime.
29. I-Fate Zero
Uma kukhulunywa nge-anime enezinto zomlando, I-Fate Zero iyabusa. Ikakhulukazi ngamazinga ayo wokuhlanya, ukunemba nokuzijabulisa.
Ngeke ngibeke noma yiluphi olunye uchungechunge lwe-Fate mayelana ne-Fate Zero, kodwa luchungechunge oluningi kakhulu lwekhwalithi olwaziyo ukuthi lungakhanya kanjani kuhlobo lwesenzo.
30. Isikole Phila
ISchool Live ibukeka iyinhle, kepha empeleni ingenye ye- kujule kakhulu imibukiso kulolu hlu. Ukubhekana nezindikimba ezifana nokugula kwengqondo, i-psychosis, i-hallucination nezinye izihloko ezifanayo.
NjengoMadoka Magica, i-anime ikukhohlisela ekucabangeni ukuthi iluchungechunge olumnandi kuze kube yilapho sekwephuze kakhulu ukubuyela emuva.
Funda: 20 Kochungechunge Olumnyama Kakhulu Lwama-Anime Oluzokushaqisa
31. UTengen Toppa Gurren Lagann
UGurren Lagann umane nje uyi- Hype uchungechunge. Futhi uma ngithi i-hype - ngiqonde ukuthi inamandla, iyahlekisa, iyashukumisa futhi ikwenza ufuthwe phezulu.
Ngiyabona lapho imibukiso efana noKill La Kill ithathe khona ugqozi kubo. UGurren Lagann kuzohlala kuyinto yakudala emehlweni ami.
32. UDeveli Uyingxenye Yesikhathi
Njengempilo eyinhlekelele ye-saiki k, le anime idala ngendlela eziphatha ngayo. Ambalwa ama-anime amahlaya angasho ukuthi adala njengaleli ngenkathi esajabulisa.
Indaba ihlekisa kakhulu ukuthi ingahlekisi. Impela sidinga isizini 2 yeDeveli Is A Part Timer!
Ucabango olucasulayo lwe-anime, alugxili kokunye ngaphandle kokuthi:
Ukusebenza ndawonye ukuxazulula puzzle.
Futhi 'ukudlala umseshi'.
Phezulu ayizwakali esezingeni lomhlaba, kepha ukuthi isetshenziswe kanjani enye indaba.
34. Uma Kungenxa Yendodakazi Yami
Uma Kungenxa Yendodakazi Yami ekhishwe ngo-2019. Futhi ngangena kuyo ngingalindelanga.
Isiqephu sokuqala siqala ngoDale othola ingane eyidimoni ehlathini, okungumndeni obulewe.
Usebenzisa le ntombazane futhi uyiqamba ngokuthi 'Latina', futhi yilapho isihloko se-anime sivela khona.
Kuyinto ucezu olukhululekile lwempilo ngeziqephu eziningi ezifudumele lapho abalingiswa abakhulu behlangana khona, futhi ubudlelwane babo buqhubeka nokukhula.
Isakhiwo asilutho olukhethekile, futhi akuyona i-anime ekhazimulayo kakhulu ngakho-ke ngeke sithakazelise noma ngubani ongene kakhulu eShounen. Kepha kulokhu okulethelayo - If It For My Daughter kuyathokozisa njengoba kuthola.
Inezici ezingokomzwelo njengoViolet Evergarden.
35. Ukuhamba Kino: Izwe Elihle
Ukuhamba kukaKino: Izwe Elihle uchungechunge lwe-anime olwenza into eyodwa kahle kakhulu: xoxa izindaba.
UKino uhamba umhlaba ngesithuthuthu sakhe, akahlali izinsuku ezingaphezu kwezingu-3 ezweni ngalinye.
Ngaphansi kwale anime lembula ukuqonda okujulile ngabantu nokuthi siphila kanjani, ngaphezulu kwezingqondo nezengqondo ezihamba ngemuva kwamasiko ahlukahlukene esihlala kuwo.
Kalula enye ye-anime enkulu kunazo zonke.
36. IKokoro Xhuma
IKokoro Connect ayifakwanga njengochungechunge 'lwezengqondo', kodwa ukuthi ivezwa kanjani? It nakanjani kuyinto.
Ucezu lwempilo nothando eceleni, le anime izokwenza ucabange ukuthi awukho omunye umbukiso wohlobo lwawo. Mayelana nezinto ezinjengokuthi abangane bakho okuthiwa 'bangempela' bacabangani ngawe lapho bekhuluma ngemuva kwakho. Noma lokho “abakucabangayo” ngawe kukonke.
Okuhlobene: Uhlu Lwama-Anime angama-Psychological angama-30 ODINGA UKUCABANGA
37. Inothi Lokufa
Ngemuva kokubuka i-Death Note kulo nyaka (2019) ngiyabona ukuthi kungani le-anime iyi kunconyiwe ngabantu abaningi.
Ngijwayele ukugwema imibukiso ye-hyped up, kepha ukukhazimula kwesakhiwo, abalingiswa nezici zengqondo akunaphutha.
Nginikeza i-Death Note i-10/10. Ngenye ye-anime ehamba phambili kunazo zonke.
UShirobako uyi-anime BONKE abalandeli badinga ukubona.
Imayelana nomkhakha we-anime ngokuthatha okungokoqobo okwenzeka ekusithekeni.
Umsebenzi ocindezelayo, ama-animators, ama-studio nabasebenzi abasebenza ngokweqile. Amashejuli, ukuthi i-anime yenziwa kanjani, yaqondiswa kanjani, futhi yakhiwa kanjani…
Ngeke uthole imininingwane eyodwa engekho enqubeni yalokho okuya ku-anime eJapane.
Akuyona nje iqiniso kodwa, kusemthethweni ngokuya ngekhwalithi nokuzijabulisa okutholayo eShirobako.
Impela enye ye i-anime ehamba phambili ka- 2010.
39. ISakura Quest
ISakura Quest iyi engaphansi ucezu lochungechunge lwempilo. Made back in 2017 Uma ngingaphosisi.
Kuyinhlanganisela enhle yezokuvakasha, ezamabhizinisi, amahlaya angenandaba nendaba ezwakalayo eqala ekuqaleni ize iphele.
Lolu hlu belungeke lulunge ngaphandle kwalo!
40. UKenichi: Umfundi Onamandla Kunabo Bonke
UKenichi uthathela kuye umthwalo wokuziqeqesha kwezobuciko bempi, emnika amandla okuzivikela nokubuyisa ukuzethemba kwakhe.
Ezweni lapho ukuxhashazwa kwenzeka nsuku zonke, le anime iyakhuthaza. Ikakhulukazi intsha.
41. Umlondolozi Womoya Ongcwele
Ngiyayithanda i-anime enomuzwa wokuthi 'umlando' unamathele kuyo.
I-Guardian Of The Sacred Spirit imayelana nenkosana elahliwe nonogada wayo wesifazane.
Abakwa-Production I.G baphinde bazikhipha futhi (benza iPyycho Pass).
42. Izimpi Zokudla
Iyiphi i-anime oyaziyo ethatha ukudla, futhi engezayo ecchi ngaphandle kokwenza isilima?
Izimpi Zokudla zibusa ohlotsheni 'lokudla', uma lokho kuyinto.
Ngeke ubone i-Shounen enobuciko, ehlukile ethatha umzila ongajwayelekile njenge-Food Wars.
Kuyifanele yonke impumelelo engayithola.
43. I-Railgun ethile yeSayensi
Umthombo: Mikoto Misaka
I-Railgun, efana neHinamatsuri, igxila ezintweni ezimbili ngasikhathi sinye.
Isenzo siyagula, nocezu lweziqephu zempilo lubanda.
Futhi ngenkathi sisesihlokweni: I-Railgun iyi-anime ENGCONO kangcono kune-Magical Index.
44. D. Umuntu Mpunga
D. Umuntu Ompunga ubelokhu ezwa njalo kwehlukile kimi. Iningi lamaShounen liyi… Shounen.
Kukhona ama-Shounen's angama-1000 ngokoqobo ngoba uhlobo lugcwele nge-BS.
D. UGrey Man ungomunye wedlanzana eligqamayo ngaphandle kokudabula eminye imibukiso emihle esezingeni elifanayo.
45. Ikhodi Geass
ICode Geass iyichungechunge lami le- # 1 Mecha / action anime, njalo.
Amacebo ahlakaniphile, abalingiswa abanamasu, ubudlova bukaLelouch… Kuningi kakhulu esingakusho lapha maqondana nokuthi kungani iCode Geass ikhazimula kangaka.
Kepha into eyodwa evelele yizici zesu le- “chess-like”.
ILelouch icabanga ngezinyathelo ezi-5 zekhanda futhi izokwenza noma yini edingekayo ukunciphisa noma yiziphi izinkinga ezivela empini.
Kukhona nokunye ukufana phakathi kweLelouch Lamperouge neLight Yagami kusuka ku-Death Note!.
46. ​​Ikilasi Lokusocongwa
Olunye uchungechunge olusha kuhlobo 'lwesikole' lwe-anime.
Ukuqhathanisa lokhu ne-anime yakho yesikole yanamuhla kuyinhlamba. Ngoba ihlukile kakhulu endleleni yayo kanye nomlingiswa oyinhloko: I-Koro Sensei ibhalwe kangcono kunezinhlamvu zakho ezijwayelekile kulezi zinsuku.
Isakhiwo uqobo lwaso ingesoqobo futhi akukho okufana nalokho ongazama ukukuqhathanisa.
47. ISamurai Champloo
Into engiyihlonipha kakhulu ngeSamurai Champloo ukuthi ihlangana kanjani namasiko amaSamurai nemidlidlizi yeHip Hop.
Angikwazi ukucabanga nganoma iyiphi i-anime eyenza lokhu. Futhi abalingiswa abayinhloko abathathu bahluke kakhulu komunye nomunye, okwenza kube lula ukukhumbula ngamunye wabo.
I-Samurai Champloo iyi-classic ephelele.
UKaizaki Arata, uNEET oneminyaka engama-27 unikezwa elinye ithuba “lokwenza kabusha” impilo yakhe. Ukumnika ithuba lokulungisa amaphutha akhe, nokwenza okuthile ngaye.
I-ReLife ingolunye uchungechunge lwesikole olusha ngokumangalisayo olungaphansi kakhulu.
49. Yeqa Beat!
ISkip Beat idayimane elifihliwe iningi labantu alikuboni ukukhanya kwe. Ngemuva kwakho konke - ine-fanbase, kepha kunjalo hhayi okujwayelekile.
Imayelana nentombazane ephindiselela isoka layo lakudala elalisebenza kanzima, imali, nobuqili ukuze liphumelele emsebenzini walo wokulingisa. Ukumjuba kuphela njengoba engash sh.
Ngihlobene nesisusa sokuziphindisela. Kodwa ikhwalithi le anime iletha ngoba yalesi sizathu yangishayisa ngomoya.
Abasayenzi imibukiso yezothando efana nalokhu.
Okuhlobene: Uhlu Lokugcina Lwamaqa We Beat Beat Ongalandisa Kuwo
UCharlotte umane nje ehlukile uchungechunge. Kuthatha umqondo ojwayelekile wamandla amakhulu, bese ukuwuphenya ekhanda.
Esikhundleni sokuthi uhlamvu ngalunye lube namandla angenamkhawulo, kunemikhawulo kulokho abangakwenza. Futhi ukwehla kokusebenzisa amakhono abo, kukwenza kube ngokoqobo futhi kube lula kunemibukiso engaqhathaniswa.
Okuhlobene: Kungani uCharlotte eyi-Anime Anime Series
51. Umthakathi Omncane Academia
Uma ngike ngathola ithuba lokuba 'yingane' futhi, nayi i-anime engingayibuka.
Ayikho insizakalo yabalandeli.
Ayikho insiza yabalandeli “yokuzama”.
Ayikho i-BS ehlanekezelwe.
Ngokuyinhloko: wonke ama-clichés ongawathola ochungechungeni olufanayo awekho ku-LWA.
IStigger Trigger sehlise ngokwabo, futhi i-anime ifanelwe ukuqashelwa kakhulu kunalokho okutholakele kuze kube manje.
Akukho okufana ne-anime yesikole esidala engu-90. Ababulali bahambe indlela yabo, futhi bagqugquzela ama-trope wezinhlamvu 'eziqinile zesifazane' ozibonayo emibonisweni yanamuhla.
Ngiyibiza ngokuthi inguqulo yakudala yesikole yeFairy Tail (ngaphandle kwensizakalo yabalandeli). Kuyindlela enhle kubalandeli be-DBZ.
Olunye uchungechunge lwesikole esidala angikwazanga ukusiza ukungeza kulolu hlu. Eminye imidwebo yakudala yesikole nemiklamo kuyizintandokazi zami kuze kube namuhla.
Angikhulumi ngo-Inuyasha kakhulu, kepha kuseseyintandokazi kungakhathalekile.
Kungokoqobo ngesikhathi sayo, futhi i-Isekai ibingeke ifane ngaphandle kwayo Inuyasha .
I-K-On iyinkosi nendlovukazi ye- 'Moe' njengoba sazi. Kepha akusikho okwenza i-anime ikufanele ukushiwo.
I-K-on iluchungechunge oludumile olungenaso isakhiwo sangempela, kodwa inezinhlamvu neziqephu ezanele zokuzijabulisa.
Umdlalo wamahlaya ungenye ye- okuhle kakhulu Ngibonile ochungechungeni lwe-anime, futhi bengingeke ngicabange ngisho ne-K-On njengehlaya 'eliqinile'.
55. Umudli womphefumulo
ISoul Eater ibukelwa phansi kangako kuhlobo lweShounen. Inani lezikhathi lo mbukiso ongakaze uvele ngalo engxoxweni liyamangaza. Ngoba i-anime uqobo yilokho engingakubiza ngokuthi 'okujwayelekile' ngempumelelo yayo.
Kuyisibonelo esivelele salokho uchungechunge 'olukhulu' lwe-Shounen olubukeka ngayo ne-protagonist yowesifazane (nowesilisa). Futhi sekela abalingiswa abanendima yabesilisa + yabesifazane.
56. UGolden Kamuy
IGolden Kamuy iluchungechunge olungavamile ngemvelo yalo yomlando. Bambalwa ama-anime angena ngokujulile emlandweni wabo njengoGolden Kamuy, ogqamisa umjaho wakudala waseJapan obizwa ngokuthi: Ainu.
Futhi iqiniso lokuthi uGolden Kamuy uyajabulisa ngaphandle kokufundisa kakhulu kukwenza kube mnandi futhi kujabulise ukubukwa.
Funda: 12 Ye-Anime Enkulu Ngokuphathelene Namasiko AmaJapane
57. Indawo Engaphezulu Kwezulu Nomhlaba
Uma ungazi kahle - uzokwazi ukuthi mina ayikwazi ukuma ubuke i-anime enguqulweni engaphansi. Ngingathanda ukubuka kubizwe futhi uvikele ukufunda imibhalo engezansi ngasikhathi sinye.
Kepha Indawo Engaphezulu Kwezwe ngibe nelukuluku lokuzibuka kunguqulo yokuqala. Futhi ngishaywa yikhwalithi.
Ungenye yochungechunge lwe-adventure oluqabula kakhulu olukhishwe emuva ku-2018.
Ukuyibiza ngokuthi 'kuyakhuthaza' kuyisisekelo.
58. UYona Wokusa
UJona Wokusa iyi-anime ebengilokhu ngifuna ukuyibuka. Ngiyajabula ngokuthi ngikwenzile.
Ngandlela thile iYona Of The Dawn iyi-adventure, uchungechunge olungaphezu kwemvelo ngamahlaya asha (futhi ayizithutha) okumangazayo. Ikakhulu ngaphezu kwaso sonke isenzo, ukuthandana ngezikhathi ezithile kanye nezigcawu zempi ngezikhathi ezithile.
Manje idinga isizini 2!
59. Bulala uLa Kill
Kuyinto akunakwenzeka ukuthi uchungechunge lwe-Ecchi lungaba kanjani nesenzo esigcwele indaba ebhalwe kahle kangaka.
Futhi yingakho uKill La Kill achithe lokho ebengikulindele kabi futhi wathatha nentshisekelo yami.
IStigrigger seStudio sizenzele ngokwaso ngalesi. Kuzohlala njalo kungu-anime wami ophezulu waso sonke isikhathi.
Okuhlobene: Uhlu Lokugcina Lwe-Kill La Kill Quotes
Angikaze ngicabange ukuthi i- 'Shoujo' anime ingajabulisa kangako. Futhi yilapho enganginephutha khona.
Ngemuva kokugijimisa i-anime efana noNana, ekhishwe nguMadhouse, angikholwa ukuthi luqine kangakanani futhi lunamandla kangakanani lolu chungechunge lwezothando.
Imiklamo 'iyiqiniso empilweni', futhi abalingiswa bahleleka kakhulu ezicini eziningi.
Zimbalwa ezothando ezisondela kulokhu ngokweqiniso kwalo.
Okuhlobene: Uhlu Lokugcina Lwalocezu Lokuphila Anime
Indlela engcono yokuchaza le anime yile: ukuthamba, ukuhamba kalula futhi uphumule kakhulu kufana nokubanda olwandle.
Isisindo esincane kumahlaya, kepha izifundo zempilo ezicashile nomlingiswa ophambili onenhliziyo efudumele kwenza lokhu kube ucezu lochungechunge lwempilo akekho umlandeli okufanele aphuthelwe.
Lokhu kungenye i-Ecchi ocishe ukulindela kwami ​​okuphansi. Futhi esikhundleni salo waneliseka.
IShimoneta yiphilisi elinzima ukugwinya abalandeli abaningi, ngenxa yokuthi yeqise kangakanani ngezinkolelo, isakhiwo, ulimi nenhloso yayo. Kepha uma ukwazi ukuyikhipha esiswini, uzomangala ngokujula ngisho nokuhlekisa ngaleli anime.
IMinami-Ke ayithathiwe kahle , isiqeshana sempilo esikhohliwe nochungechunge lwamahlaya. Imayelana nodade abathathu abahlala endlini eyodwa, nawo wonke ama-shenanigans abavuka.
Ngezinkathi ezi-3 sezizonke nezingama-cliches empeleni kuyahlekisa, angikaze ngithole isiqephu ngingahleki.
Ngingayilinganisela ngo-10/10 ngaphandle kokungabaza.
64. Izwe Labakhazimulayo
Izwe Lezinkazimulo iyi-anime eyenza i-CGI ibukeke kangcono kunangaphambili. Futhi uma ubuke i-anime eningi, uzokwazi ukuthi i-CGI embi kangakanani.
I-Land Of The Lustrous iyisa kwelinye izinga ngekhwalithi yayo yokugqwayiza. Ngingathi kungcono kakhulu kune-Violet Evergarden ngendlela yayo.
Futhi le ndaba uqobo lwayo iyindida kepha iyajabulisa ngokwanele ukukuthwala kuze kube sekupheleni ngaphandle kokuzwa ukuthi uchithe isikhathi sakho.
Kuyinto kuhle uchungechunge olunezinhlamvu ezingakhohlwayo.
65. Uchungechunge lweMonogatari
I-Monogatari uhlobo olukhethekile lwe-anime ohlotsheni olungaphezu kwemvelo / lwamademoni. Uhlobo lwe-anime olugcwele izingxoxo kanye neziqephu ze- 'chatty', ngakho-ke kungahle kujikise abanye abantu.
Kepha uma unamathela kuyo futhi ufika ezingxenyeni ezinhle, uzobona ukuthi lokhu kucabanga nokucabanga okuthakazelisa kakhulu kuvela kanjani.
Futhi njengoba ikhiqizwa yi-Studio Shaft, ukugqwayiza nokuguquka phakathi kwezigcawu kuhle.
Kuyinto izinkondlo ziyahamba.
UNisekoi nayo ikhiqizwa yi-studio Shaft, njengoMadoka Magica noMonogatari.
Lokhu akufani ne-anime yakho ejwayelekile ye-harem lapho igcwele khona ama-cliches nama-trope ayisiphukuphuku kanzima ukuyithatha ngokungathi sína.
UNisekoi uchungechunge lwekhwalithi olunezinhlamvu ezithile ezifanele ezenza yonke i-anime ikhanye njengesihlahla sikaKhisimusi ngoDisemba.
Uma ufuna ukubuka ucezu lochungechunge lwempilo olunokujula okuningi kubalingiswa, nemiyalezo eshukumisa ingqondo - U-Oregairu nguyena ozobona.
Cishe akekho yabalingiswa abakulolu chungechunge akubhalwanga kahle. Abalingiswa abaqavile babamba inani elikhulu endabeni yonke, kanye nemiyalezo kwesinye isikhathi 'efihliwe' ngaphansi kobuso.
Nginomuzwa wokuthi u-Oregairu ubhekelwe phansi futhi abantu abenele abamemeze ngakho kakhulu. Noma kukalwe kakhulu.
Owari Akekho USeraph.
Hhayi Non Biyori.
23 Ezinkulumweni ze-Anime Ezinkulu Kunazo Zonke Isikhathi